Ciidanka dawlada Puntland oo qabsaday Galgala iyo deegaanka ku xeeran; wafti ka socda Puntland oo kormeeraya goobaha dagaalku ka dhacay. – Radio Daljir
Ciidanka dawlada Puntland oo qabsaday Galgala iyo deegaanka ku xeeran; wafti ka socda Puntland oo kormeeraya goobaha dagaalku ka dhacay.
Agoosto 9, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Aug 09 – Dagaal socday muddo 24 saac ah ayaa ciidanka Puntland ay ku qabsadeen buuraleyda Galgala. Xiriir aan la samaynay saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland ee furinta dagaalka, madaxtooyada Puntland ee Bossaso iyo qaar dadka ku nool deegaanka ayaa xaqiijiyey.
Dagaalka ayaa u dhexeeyey ciidanka dawlada Puntland iyo kuwa taabacsan wadaadka mayalka adag ee Sh. Maxamed Siciid Atam oo muddo sannado ah Galgali ay saldhig u ahayd.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Gen. C/llahi Axmed Jaamac ‘Ilkajiir’ oo ka waramay dagaalka saaka ayaa sheegay in ciidanka Puntland ay abaara 9:00 subaxnimo la wareegeen Galgala; khasaaraha dagaalka ayaa uu sheegay in uu ahaa mid kooban.
M/weynaha Puntland C/raxmaan M. Faroole oo u waramay laanta af-Somaliga ee BBC-da ayaa sheegay in saaka subaxnimadii hore ay ciidanka Puntland qabsadeen Galgala iyo nawaaxigeeda, ayna sugi doonaan amniga deegaanka ku xeeran.
M/weyne Faroole waxaa uu sheegay in walow aan la hayn tiro koob dhab ah ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee labada dhinac, in tiro ku dhow 50 laga dilay ciidanka Sh. Atam halka sida uu sheegay aanay jirin wax dhimasho ah oo dhinaca ciidanka Puntland ka soo gaaray dagaalka maanta.
Mar uu ka hadlay qorshaha fog ee dawladiisa ee ku aadan amniga Puntland ayaa uu sheegay in laga sifayn doono Puntland kooxaha mayalka adag ee sida uu sheegay ka mas’uulka ah xasilooni darida ka taagan koonfruta Somaliya.
Waxaa uu intaa ku daray in ay jireen dad badan oo lagu qabtay Galkacyo iyo Garowe oo ka soo talaabay koonfurta Somaliya, una socday in ay taageeraan ciidanka ka dagaalamaya buuraleyda Galgala.
Dhinaca kale afhayeen u hadlay Sh. Atam oo saxaafada qaar taleefan kula soo xiriiray ayaa sheegay in aan laga guulaysan, balse ay dib u garasho xeel dagaal uga baxeen Galgala, ay diidayeen in dhibaato soo gaarto dadka shacabka ah, ayna qorshaynayaan rogaal celis dagaal oo xeeladaysan.
Warar aan al xaqiijin ayaa sheegay in ciidamo tiro yar oo uu hogaaminayo Sh. Atam ay u talaabeen gobolka Sanaag.
Dawlada Puntland ayaa ku eedaysay Sh. Atam in uu gacansaar la leeyahay ururka Al-shabaab ee ka dagaalama koonfureed ee Somaliya, uuna ka mas’uul ahaa dilalka iyo qaraxyada ka dhaca gobollada Puntland.
Sh. Atam ayaa ku eedeeya hoggaanka Puntland in aanay Muslim ahayn, ayna u adeegaan cadwawga Islaamka; hore ayaa uu u qirtay in uu xiriir joogta la leeyahay Al-shabaab, walow uu gadaal ka beeniyey xiriir ka dhexeeya isaga iyo Al-shabaab.
Sh. Atam ayaa ku dooday in dagaalkiisu uu ku salaysan yahay ilaalinta deegaanka, walow uu sheegay in uu doonayo nidaam Islaami ah oo uu ka yagleelo dhulka uu ku sugan yahay; calanka ay caanka ku yihiin Al-shabaab ayaa lagu arkay tuulooyink ka mid ah gobolka Bari.
Wadahadalo nabadeed oo ay hormood ka ahaayeen nabadoonada iyo Isimada gobolku ayaan mira dhalin, walow lagu hanweynaa in si nabad ah lagu xallilo dhibta Galgala, mase noqon.
Guddiga wacyigelinta bulshada oo shirkoodii maanta farriimo isugu dhafan feejignaan & hogatusaalayn u diray shacabka Puntland.
Dagaal khasaare gaystay oo aaga Galgala ku dhex maray ciidanka Puntland & kuwa Sh. Atam.